www.camaloow.com - News: Dowlada Soomaaliya oo hakisay duulimaadyada Qaadka ee Kenya Laga keenaayay———————-
December 10 2018 05:47:42
Dowlada Soomaaliya oo hakisay duulimaadyada Qaadka ee Kenya Laga keenaayay———————-
Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa joojisay diyaaradihii qaadka geyn jiray Soomaaliya.
Wasiirka gaadiidka iyo Duulista Hawada ee xukuumada Federaalka Soomaaliya Cali Axmed Jaamac Jangali ayaa sheegay in go’aankan uu yahay mid quseeya dhammaan garoomada diyaaradaha ee Soomaaliya oo dhan.
Dowlada Soomaaliya ma cadeyn sababta ay qaadka u joojisay iyo inta uu socon doona amarka lagu hakiyay qaadka la geyn jiray Soomaaliya.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in garoonka diyaaradaha Wilson Air Port oo inta badan ay ka soo duulaan diyaaradaha qaadka geeya Soomaaliya aysan wax diyaarad ah saakay ka soo bixin.
In ka badan 30 diyaaradood ayaa maalin walba Muqdisho iyo gobolada kale waxay geyn jireen Jawaano qaad ah oo ganacsatada ay ka soo dhoofin jireen dalka Kenya.
Diyaaradaha ayaa tagi jiray magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo, Gaalkacyo, Kismaayo iyo Laascaanood, waxaana durba soo if baxaya inuu dhaqan galayo go’aanka sida KMG ah ay dowladda Soomaaliya ku joojisay qaadka ka imaan jiray Kenya.
Ganacsatada Soomaalida ee qaadka iibisa ayaa walaac ka muujiyay talaabadan lagu hakiyay qaadka la geyn jiray Soomaaliya.
Sidoo kale ganacsatada iyo dadka beeraha leh ee Kenya ayaa ayaguna walaac ka muujiyya go’aanka ka soo baxay dowlada Soomaaliya iyadoo hore wadamada Yurub ay u mamnuuceen qaadka laga dhoofin jiray Kenya ee la geyn jiray wadamadaas.
· salaad on October 16 2017 · 0 Comments · 63105 Reads ·
Render time: 0.02 seconds 28,902,469 unique visits